Sida loo fududeeyo ka-wareejinta MS Office ilaa LibreOffice | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo fududeeyo ka-wareejinta MS Office ee LibreOffice
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Lagu taliyay
Qolalka xafiisku waa aalad aasaasi u ah geeddi-socodka socdaalka ee nidaam kasta oo qalliin, ma aha oo keliya goobta shaqada laakiin sidoo kale dadka isticmaala guryaha. Tani maahan wax qarsoodi ah, su'aasha ugu badan ee qofku maqlo markii uu qof kale u soo jeedinayo suurtagalnimada u beddelashada GNU / Linux waa: "Miyaan awoodi doonaa inaan furo faylka noocaas ah ee MS Office?" Sababtaas awgeed, muhiimadda yar ee aan siinno qolka xafiiska ee GNU / Linux ayaa sii jiidaneysa dareenkeyga. Si kale haddii loo dhigo, waxaan aaminsanahay in GNU / Linux dhab ahaantii si ballaaran loo adeegsado iyo in lagu guuleysto suuqa kumbuyuutarka kumbuyuutarka mar iyo dhammaanba, looma baahna tifaftire fiidiyoow ah oo horumarsan ama tifaftire muuqaal ah oo run ahaantii la socda. dhererka Photoshop, xitaa ma ahan qalabka ciyaaraha sida Steam. Waxa kaliya ee ay qaadataa waa in la fududeeyo kala-guurka.
Helitaanka warshad GNU / Linux ah oo lagu rakibay kombuyuutarro badan xaqiiqdii waa tallaabo loo qaaday dhinaca saxda ah, laakiin caawimaad noocee ah ayay noqonaysaa haddii, tusaale ahaan, qolka xafiisku aanu kuu oggolaanayn inaad furto faylasha dadku ku shaqeynayo? Sababtaas awgeed, mid ka mid ah waxyaabaha aan kula talinayo dadka doonaya inay tijaabiyaan GNU / Linux ayaa ah inay bilaabaan inay isku dayaan barnaamijyo barnaamijyo bilaash ah oo waliba ka shaqeeya Windows. Habkaas, kala-guurka ayaa ka fudud. Marka, tusaale ahaan, waxaan rakibaa LibreOffice, VLC, GIMP iyo Firefox, iyo kuwo kale, si ay ula qabsadaan is dhexgalka iyo hawlgalka guud.
Kiiska gaarka ah ee LibreOffice waa, sidaan horayba u sheegay, gaar ahaan muhiimad mana aha dhibaato la'aan. Tilmaamahan yar ayaa ujeedkiisu yahay inuu caawiyo kuwa isku dayaya qolalka xafiiskan si ay u gaaraan go'aan aqoon leh, iyo inay ogaadaan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka isticmaalka barnaamijkan.
1 Maxaa loogu beddelay LibreOffice?
2 Dhibaatooyin noocee ah ayaan kala kulmi karaa haddii aan go'aansado inaan tahriibo?
2.1 Taageerada faylka ma fiicna
2.2 Macros ma shaqeeyaan
2.3 Lama tafatiri karo dukumiintiyada si wada jir ah
2.4 Ficil la'aanta ama khaladaadka (cayayaanka)
3 Su'aalo kale
3.1 Baro isbarbar dhigyada
3.2 Hab maamuuska socdaalka ee LibreOffice
3.3 Ku rakib Fonts Microsoft
Maxaa loogu beddelay LibreOffice?
Waa lacag la'aan. Si ka duwan MS Office, looma baahna inaad bixiso lacag aad u tiro badan inaad awood u leedahay inaad isticmaasho. In kasta oo tan iyo lafteeda ay u noqon karto sabab macquul ah shaqsi adeegsade, haddana waxay saameyn weyn ku leedahay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, oo sida caadiga ah u adeegsada hal nuqul oo ka mid ah barnaamijyada xafiiska kombiyuutarrada ganacsiga. Dad badan, xitaa shirkadaha qaar ama Gobolka laftiisa, waxay doorbidaan inay ka fogaadaan dhibaatadan iyaga oo adeegsanaya nuqullo burcad-badeednimo oo ka tirsan Xafiiska MS, iyadoo ay ka dhalan karto khatar amni oo tan ka dhalan karta. LibreOffice, dhanka kale, waa baddel ammaan ah oo ammaan ah.
Waa software bilaash ah. Sida dhammaan softiweerrada bilaashka ah, LibreOffice waxay heshaa horumarro isdaba-joog ah, oo saameyn toos ah ku leh amniga iyo xasilloonida barnaamijka. Intaa waxaa dheer, LibreOffice waxay leedahay mid ka mid ah jaaliyadaha ugu firfircoon, oo si joogto ah uga shaqeynaya ka mid noqoshada howlaha cusub iyo saxitaanka qaladaadka.
Adeegso qaabab bilaash ah: Si ka duwan DOC, WPD, XLS ama RTF, kuwaas oo ah qaabab xiran oo kaliya abuurayaashooda ay si fiican u yaqaanaan, LibreOffice waxay isticmaashaa Qaab bilaash ah ODF, taas oo noqotay heerka caalamiga ah ISO 26300: 2006. Xaqiiqda isticmaalka qaab furan oo heer caadi ah ayaa ka hortageysa duugsanaanta dukumiintiyadaada waxayna u oggolaaneysaa in la furo mustaqbalka.
Waa madal badan: Waxaa jira noocyo ka mid ah LibreOffice oo loogu talagalay Windows, Mac iyo Linux. Tani waxay fududeyneysaa kala-guurka, gaar ahaan haddii aadan adeegsan isla nidaamka qalliinka guriga iyo shaqada, tusaale ahaan.
Ma jeceshahay isku-xidhka xargaha ee 'MS Office'. Isticmaalayaal badan ayaa doorbidaya inay ka tagaan MS Office sababtoo ah ma aysan awoodin inay la qabsadaan qalabka xargaha. LibreOffice, dhanka kale, wuxuu leeyahay "muuqaal" muuqaal muuqaal ah, kaas oo sahlaya kala-guurka kuwa loo bartay interface-kii hore ee MS Office.
Dhibaatooyin noocee ah ayaan kala kulmi karaa haddii aan go'aansado inaan tahriibo?
Waxaan horay u aragnay sababaha looga gudbay. Si kastaba ha noqotee, sida geeddi-socodka socdaal kasta, dhibaatooyin ayaa soo bixi kara. Aynu eegno kuwa ugu caansan:
Taageerada faylka ma fiicna
LibreOffice iyo MS Office uma adeegsadaan qaab isku mid ah faylalka ay wataan. Sidaan horeyba u aragnay, LibreOffice waxay isticmaashaa ODF. Dhinacooda, noocyada gaboobay ee MS Office waxay adeegsadaan qaab xidhan (DOC, XLS, iwm.) Oo kaliya Microsoft ay si qoto dheer u taqaano. Laga bilaabo 2007, MS Office wuxuu adeegsadaa OpenXML ugu talagal ahaan, sidoo kale loo yaqaan OOXML (DOCX, XLSX, iwm.). Si ka duwan qaabkii hore, tan waxaa loo qaadan karaa qaab furan (sida ODF) waxayna ku guuleysatay inay noqoto heer caalami ISO / IEC 29500.
In kasta oo noocyadi udambeeyay ee LibreOffice iyo MS Office ay keenaan iswaafajinta qaababkan oo dhan - iyo kuwa kale oo badan - runtu waxay tahay inaysan qummanayn, taas oo badanaa micnaheedu yahay in faylalku aysan iskumid ahayn barnaamij hal barnaamij oo kale. Tani, dabcan, way ka culustahay arrinta LibreOffice, maadaama ay ka yartahay adeegsiga MS Office. Sababtaas awgeed, waa adeegsadayaasha 'LibreOffice' kuwaas oo ay tahay inay la qabsadaan qaababka awoodda leh, haddii tani ay noqoto mid aan laga hortegi karin, dabcan.
Sidee loo yareeyaa dhibaatadan?
Waa hagaag, waxa ugu muhiimsan halkan waa in la go'aamiyo in feylasha su'aasha ay tahay in dib loo saxo iyo in kale.
Haddii ay habboon tahay in tafatirku uusan muhiim ahayn, markaa xalku waa mid aad u fudud. Waxaa ugufiican in dukumiintiga loo dhoofiyo PDF lana wadaago feylasha halka asalka ah. Tani waa run labadaba faylasha MS Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX, iwm) iyo waliba faylasha LibreOffice (ODF), inkasta oo ay run tahay in taageerada LibreOffice ay kujirto dukumiintiyada MS Office aysan ahayn kaamil ah, oo keliya noocyada cusub ee MS Office-ka waxaa ka mid ah taageerada ODF, iyo xoogaa xun oo taageero xaddidan leh. Adoo la wadaagaya feylka qaab PDF ah, taa bedelkeeda, waxaan hubin doonnaa in kuwa fura faylka ay u arki karaan sidii loogu talagalay. Waxaa xusid mudan in LibreOffice ay kujirto suurtagalnimada in dukumiinti loo badalo PDF iyadoon loo baahnayn in lagu rakibo wax dheeri ah ama xirmo dheeri ah. Kaliya waa inaad tagtaa Fayl> Dhoofinta sida PDF. Isticmaalayaasha doonaya inay sidaas sameeyaan waxay sidoo kale u habeyn karaan taxane xulashooyin ah si ay u habeeyaan dhoofinta la sheegay, taas oo habka ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan ee aan ku arkay nooca xafiisyada xafiiska.
Haddii ay dhacdo in tifaftirka feylka la wadaagayo ay lagama maarmaan tahay, markaa ma jiraan xalal dhammaystiran, in kasta oo ay jiraan talooyin qaarkood oo xisaabta lagu darayo Midka ugu horreeya uguna horreeya waa in lagu kaydiyo faylalkaan qaab MS Office 97/2000 / XP / 2003. Khibradeyda dheer ee adeegsiga LibreOffice, iyo ka hor OpenOffice, waxaan si badbaado leh u dhihi karaa in faylasha qaab DOC ay (ku dhowaad) had iyo jeer ka fiican yihiin kuwa laga taageero faylasha DOCX. Isla sidaas ayaa loo odhan karaa faylasha XLS iyo faylasha XLSX, iwm. Dhinaca kale, in kasta oo had iyo jeer la doorbido in la isticmaalo qaabab bilaash ah, MS Office waxaa ku jira taageero fayl ODF ah oo aan aqoon lahayn. Gabagabadii, wax laga xumaado, xalka ugu fiican ayaa ah in lagu kaydiyo faylka qaabkii hore ee MS Office. Kani waa, aragtidayda, waa wax aad uxun maadaama LibreOffice ay kamid tahay taageero fiican oo looheysto qaabka MS Office ee lahaanshaha, halkii lagaheli lahaa qaabka OOXML furan. Laakiin haye, taasi waa xaqiiqda murugada leh.
Dhinaca kale, sida LibreOffice ay u keydineyso feylasha qaabka ODF si caadi ah, mar kasta oo aan keydinno feyl qaab kale ah waxaan helnaa calaamadda naga digaya dhibaatooyinka iswaafajinta ee suurtogalka ah. Haddii ay tani tahay wax laga xumaado oo aad rabto inaad had iyo jeer ku keydiso qaab MS Office 97/2000 / XP / 2003, waxaa suurtagal ah in la beddelo habdhaqankan adoo aadaya Qalabka> Ikhtiyaarrada ka dibna Xamuul / Keydso> Guud. Halkaas waa inaad ka saarto sanduuqa Ii digtoonow markaan ku keydin qaabka ODF iyo Had iyo jeer badbaadi sida dooro MS Office 97/2000 / XP / 2003, sida ka muuqata shaashadda hoose.
Macros ma shaqeeyaan
LibreOffice waxaa ku jira taageerada Macros, laakiin kuwan waxaa lagu kaydiyaa iyadoo la isticmaalayo luuqad ka duwan tan ay adeegsato MS Office. LibreOffice waxay isticmaashaa luqad la yiraahdo LO-Basic, halka MS Office ay isticmaasho nooc hoos udhacay oo ah Visual Basic oo si gaar ah loogu talagalay barnaamijyada, oo caan ku ah VBA. In kasta oo labada luqadoodba aad isugu eg yihiin, haddana waxay leeyihiin kala duwanaansho mana waafaqsana. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, LibreOffice waxaa ku jira taageero aasaasi ah oo loogu talagalay VBA, iyo MS Office kuma jiraan wax taageero ah oo loogu talagalay LO-Basic. Tani waxay ka dhigeysaa macros-ka ku qoran MS Office marar dhif ah inay si fiican ugu shaqeeyaan LibreOffice, iyo taa lidkeed. Ugu dambeyntii, ka LO-Dukumiintiga aasaasiga ah Aad bay u liidataa, xitaa Ingiriisiga. Kuwa xiiseynaya hanashada LO-Basic, waxay fiirin karaan tan hore hagaha barnaamijyada.
Dhibaatadan soo food saartay, ma jirto meel laga baxsado, runtii. Waxa kaliya ee haray ayaa ah in la iska daayo adeegsiga macruufka ama lagu turjumo macros-ka gacanta, taas oo noqon karta hawl yar oo fudud marka laga hadlayo macrosyada ugu fudud ama odyssey dhab ah oo ku saabsan macruufyada aadka u murugsan.
Lama tafatiri karo dukumiintiyada si wada jir ah
In kasta oo dhowr sano ka hor la shaaciyey in shaqadan ayaa la horumarinayay, iyo xitaa fiidiyoow leh nooc shaqo ah ayaa lagu soo daray, sababo jira awgood waligeed waligood ma horumarin. Ergo, LibreOffice wali awood uma lahan inay si wada jir ah wax uga beddelaan dukumiintiyada.
Xilligan la joogo, ikhtiyaarka ugu fiican ee adeegsadayaasha GNU / Linux waa inay adeegsadaan Google Docs, Zoho, ama adeeg daruur kale oo la mid ah. Waxyaabaha kale ee bilaashka ah waxaa ka mid ah in la muujiyo OnlyOffice y Etherpad, kaas oo sidoo kale u oggolaanaya dukumiintiyada shaqada si wada shaqeyn ah.
Ficil la'aanta ama khaladaadka (cayayaanka)
LibreOffice iyo MS Office ma keenaan waxqabad isku mid ah. Tani waxay ka dhigan tahay in waxyaabaha qaarkood ee lagu qaban karo LibreOffice aan lagu sameyn karin xafiiska MS Office iyo dhanka kale. Waxaa macquul ah, in howlo badan ay ka maqan yihiin LibreOffice marka loo eego kuwa ka jira MS Office, gaar ahaan LibreOffice Impress and Base, oo u dhiganta MS Power Point iyo Access.
Ka warqabida xadeyntaas kahor waa muhiim marka aad u guureyso LibreOffice. Si aad u aragto liis isbarbardhig buuxa oo ah shaqooyinka LibreOffice iyo MS Office waxaan soo jeedinayaa aqrinta Aasaaska Dukumiintiga wiki. Waa in la ogaadaa in arrimahaas qaarkood aysan ahayn kuwo culus sida ay umuuqdaan. Xaqiiqda ah in LibreOffice Base uusan u dhameystirnayn sida MS Access uusan muhiim u aheyn hadaan tixgalino in Access laftiisa loo arko inuu yahay nidaam duugoobay oo duugoobay, oo si weyn ay uga sarreeyaan kuwa kale oo ka casrisan. Marka laga hadlayo khaladaadka barnaamijku yeelan karo, maadaama ay tahay barnaamij bilaash ah, waa lagugula talinayaa sheeg cayayaanka si bulshadu u sixi karto.
Baro isbarbar dhigyada
Waa muhiim in la barto magaca barnaamijyada u adeegta beddel ahaan mid kasta oo ka mid ah aaladaha MS Office, iyo sidoo kale kordhinnada kala duwan ee loo adeegsaday midkiiba.
Ereyga (.doc, .docx) Qoraa (.odt)
Barta Awoodda (.ppt, .pps, .pptx) Muuqaal (.odp)
Gaaritaan (.mdb, .accdb) Saldhig (.odb)
Visio (.vsd, .vsdx) Sawir (.odg)
Hab maamuuska socdaalka ee LibreOffice
Mu'asasada Dukumintiga, oo ah aasaaska ka dambeeya horumarinta LibreOffice, ayaa diyaarisay a hab maamuuska socdaalka qolalka xafiiskan oo ay ku jiraan liiska tallaabooyinka la qaadayo marka la bilaabayo geeddi-socodka socdaalka ee urur kasta. Dukumintigaan waxaa lagula talinayaa inaad akhriso.
Ku rakib Fonts Microsoft
Mid ka mid ah sababaha ay dukumintiyada qaarkood aysan ugu muuqan kuwo isku mid ah Windows iyo GNU / Linux waa sababta oo ah noocyada loo adeegsado Windows kuma xirna qaab ahaan GNU / Linux. In kasta oo beddelka bilaashka ah ee la yimaada GNU / Linux ay aad isugu eg yihiin oo qaarkoodna, xitaa farsamo ahaan ka sarreeyaan, isku mid ma aha.
Dib ugu laabo 1996, Microsoft waxay soo saartay "xirmo faneed run ah oo run ah". Font-yadaani waxay lahaayeen rukhsad aad loo oggol yahay, sidaa darteed qof kastaa wuu rakibi karaa. Waqtigaas ka dib Microsoft waxay dooneysay in noocyadooda ay noqdaan noocyada caadiga ah ee adduunka oo dhan, sidaa darteed waxay u sii daayeen qof kasta oo doonaya inuu isticmaalo. Xirmooyinkaani waxaa ka mid ah Andale Mono, Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impacto, Times New Roman, Trebuchet, Verdana iyo Webdings fonts. Xusuusnow in Times New Roman ay ahayd fartii ugu dambeysay ee dukumiintiyada Xafiiska illaa 2007.
sudo apt-hel rakib ttf-mscorefonts-rakibiyaha
Waxaa kale oo la rakibi karaa noocyada noocyada ee Clear ee Microsoft. Ilahaani waa: Constantia, Corbel, Calibri, Cambria, Candara, iyo Consolas. Calibri wuxuu noqday farta rasmiga ah ee Microsoft Word laga soo bilaabo 2007 wixii ka dambeeyay. Nasiib darrose, Microsoft waligood uma aysan sii dayn font-kan dadweynaha, sidii ay ugu samaysay noocyada True Type. Si kastaba ha noqotee, waxay ku dartay noocyadan oo qayb ka ah PowerPoint 2007 Viewer, oo loo heli karo soo dejin bilaash ah. Adoo ka faa'iideysanaya xaaladdan, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo qoraal soo degsanaya Microsoft PowerPoint Viewer, oo laga soo saarayo noocyada Clear Nooca, oo lagu rakibayo nidaamkaaga GNU / Linux.
wget -O vistafonts-rakibiyaha http://paste.desdelinux.net/?dl=5152
Ha iloobin inaad siiso rukhsad fulin ah faylka kadibna aad socodsiiso:
sudo chmod + x vistafonts-rakibiyaha ./vistafonts-installer
Si aad ugu isticmaasho xarfahaan caadiga ah LibreOffice kaliya tag Qalabka> Dejinta ka dibna Qoraa LibreOffice> Fonts Aasaasi, sida ka muuqata shaashadda hoose.
Adiga oo tixgelinaya khibradaada isticmaale ahaan GNU / Linux, maxaad kale oo su'aalo ah oo aad kula talin lahayd dadka isticmaala ee ka fikiraya u guurista LibreOffice?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo fududeeyo ka-wareejinta MS Office ee LibreOffice
Waxay ahayd qiyaastii shan sano tan iyo markii aan u haajiray LibreOffice oo aan kufsaday dad badan isbeddelka. Khiyaanadaydu maahan inaan qof dhibaateeyo.
Marka kuwa ka shaqeeya qolka daaqadda ay ii soo diraan dukumiinti, waxaan dib ugu soo celiyaa qaybtayda labada qaab, doc iyo odf. Tusaale ahaan, waxaan ka dhigayaa inay ogaadaan sida iftiinka ay u shaqeynayaan ka dib markay gacmahayga ku jiraan. Wadahadalku wuu dhashaa ka dibna waxaan u sheegaa qoladayda, waxaan u sheegayaa inay ku rakibaan mashiinadooda daaqado ama mac, inay isku dayaan, labada barnaamijba yeeshaan iyo inay isbarbar dhigaan xawaaraha shaqada mid iyo tan kale.
Waxaan soo maray kiisas wada-hawlgalayaal ama macaamiil ka tagay qolka oo dhawr bilood ka dib sidoo kale OS lahaansho maxaa yeelay waxay ogaadeen in Libre uu ka waxtar badan yahay, dhakhso badan yahay, raaxo badan yahay.
Oh, oo waligay weligay kuguma baari doono falsafadda falsafadda ah ee sababta inbadan oo naga mid ahi u adeegsadaan barnaamijyada bilaashka ah. Waxay rabaan wax soo saar hufan oo waliba bilaash ah! Khibradeyda, cayda iyo dirida daaqadaha oo aan ka doorbidayo GNU linux dhinacyo aan ka ahayn qoraallo soosaara oo si gaar ah wax u soo saara oo aan ku darin.
Waad ku mahadsantahay wadaagida khibradaada.
Khibradeyda, marwalba way kafiican tahay LibreOffice inaad keydiso feylasha qaabkooda furan oo kaliya aad ugu keydiso qaab MS Office ah markii aad rabto inaad u dirto qof isticmaalaya qolka xafiiska.
Haddii lagu keydinayo bilowga qaab xiran, dukumintigu wuu kala duwanaan karaa ama wuxuu siin karaa dhibaatooyin qaab / qaab ah markasta oo aan furno iyo, in kasta oo la saxo khaladaadka, waxay dib u soo muuqdaan markii dukumiintiga markale laga furo LibreOffice.
Waxaan si buuxda ula wadaagayaa ra'yigaaga.
Maqaal aad u wanaagsan ..
Dhibaato ayaan ku qabaa qoraalka noocyada:
bash :./vistafonts-installer: / bin / sh ^ M: turjubaan xun: Faylka ama galka ma jiro
laakiin feylku wuxuu ku jiraa galka ~ /
Waa inaad dejisaa rukhsad fulin leh chmod + x vistafonts-rakibayaal.
Haddii aan u dhigo rukhsadda oggolaanshaha fulinta feylka .. Sikastaba, waxaan ku sameyn doonaa gacanteyda sidii | emir |
Waxaa laga tafatiray daaqadaha, waa inaad ka saartaa astaamaha qarsoon ee micnaheedu yahay jabinta khadka ee daaqadaha geliya. Waxaa jira barnaamij yar oo sameeya dos2unix. Waad rakibtaa iyaga "apt-get install dos2unix" intaasna waxaad ku bixin doontaa ^ M kuu muuqanaya.
Anigu ma heli karo feylka aan u baahanahay inaan wax ka beddelo si aan ugu socodsiinayo qoraalka. Waa maxay magaca iyo galkee ayaan si sax ah uga helaa?
bedelka dhabta ah waxaa lagu magacaabaa wps office, waa isku xirka xafiiska microsoft, dadka isticmaala badankood waxaa loo isticmaalaa is dhexgalka xafiiska microsoft sababtaas darteed waa ka fiican wps
WPS badal ahaan Freeware way fiicantahay. Beddel ahaan LibreOffice ama OpenOffice ayaa ugu fiican.
Maqaal aad u fiican laakiin aad u fiican!
| amiirka | dijo
maqaal aad u wanaagsan oo ka buuxa talooyin xiiso leh
Dhibaatada tuubada qoraalka sida Jose, ma garanayo haddii OS-ga aan la xiriirin laakiin waa la xaliyay
Waan akhriyay oo waxaan helay tilmaamaha aan ku soo dejinayo faylasha farta oo aan gacanta ugu rakibo terminal.
Jawaab | emir |
Marka laga hadlayo shaqada iskaashiga, Calc-ku si aad ah ayuu u shaqeeyaa, illaa iyo hadda igama uusan guuleysan.
Ku jawaab franksanabria
Waa run. Waxaan hilmaamay inaan ku sheego Calc waad ku samayn kartaa… Ma fahmin waxa ay sugayaan si ay ugu suurtageliyaan tan Qoraha.
Toddobaadkan kaliya waxaan go'aansaday inaan joojiyo isticmaalka qaybta Microsoft, oo dabcan waa barnaamij weyn, inaan u beddelo noocyada bilaashka ah, oo si kadis ah aan sannado badan ugu isticmaali jiray guriga Linux iyo Windows Taasi waa, Thunderbird halkii laga siin lahaa Muuqaalka iyo LibreOffice halkii Xafiiska laga heli lahaa.
Marar badan ayaan Xafiiska u hayey si ay ula jaan qaadaan dukumiintiyada asxaabta kale iyo macaamiisha, laakiin waxaan xaqiiqsaday in dukumiintiyada la is weydaarsadaa ay aad u yar tahay, isticmaalka ugu weyni uu yahay mid aniga ii gaar ah, marka ma arko sabab aan u adeegsado softiweer lahaansho oo aan jeclahay xaalado kale oo badan waxay leedahay asal aan ku habboonayn.
Sida loo ololeeyo ... si deggan, haddii aad i weydiisato dukumeenti waxaan ku siinayaa ikhtiyaarka ODF iyo shirkadda, PDF ama qaabab Microsoft ah oo loo beddelay LibreOffice. Maaha in la sameeyo heck, laakiin marwalba waxaan layaabay sababta dad badan oo SME ah ay u adeegsadaan softiweer lahaansho qaybta ugu fudud, oo ay tahay in wax lagu daro.
daadihiyaa 369 dijo
Runtu waxay tahay, Excel wuxuu aad uga sareeyaa Calc, waxaan isku dayay hal mar inaan ka shaqeeyo tan dambe laakiin markaan la shaqeeyo wax ka badan 100.000 oo rikoodh way is laalaysaa, iyadoo Excel ay wada buuxsan tahay oo macroskeeda ay aad u fududahay barnaamijka, waxaad ku arki doontaa Suunka marka laga soo tago muuqaalka, Calc wuxuu u baahan yahay in wax badan la hagaajiyo si looga dhigo bedel adag xafiiska, waa fekerkeyga xirfadeed ee hooseeya ..
Jawaab angelrell 369
Waxaan u maleynayaa isku mid. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa in sidoo kale la sheegaa in kastoo laga yaabo inaysan gaarsiisneyn heerka MS Excel, runta ayaa ah in 90% dadka isticmaala aysan isticmaalin wax ka badan qeyb yar oo ka mid ah waxa barnaamijku bixiyo ... iyo LibreOffice way awoodaa samee kuwa "aasaasiga ah" waxyaabaha si yar u fiican.
Dhibaatadan waxaa lagu xalliyay iyadoo la qaabeynayo qaybta xusuusta ee LibreOffice, waa inaad kordhisaa isticmaalka xaddiga loo qoondeeyay ee wanka.
Fikrad ka dib "silica" hirgelinta ApacheOpenoffice goobtayda shaqada.
- Furitaanka dukumiinti waxay ka qaadataa 5-6 jeer in ka badan intii aan ku bilaabi lahaa MSOffice. Cawaaqibka tan:
Haddii galab aad ku qaadan doontid qorista isla qoraalka, tani muhiim idiinma aha adiga, laakiin aniga iyo shaqaalahayga ila shaqeeyaa waxaan 40% waqtiga ku bixineynaa furitaanka iyo xiritaanka feylasha si aan u hubino xaaladda feylal kasta inta aynaan bilaabin qoritaanka jirka. ee qoraalka cusboonaysiinta faylkaas.
Caadi ahaan waxaan haysannaa dad dibedda ah oo sharraxa isbeddelka faylka bilawgii, iyo xaalado badan waxay ka kooban tahay iyaga oo siiya warar aad u xun, marka halkii aan awood u siin lahayn iyaga oo ah sheeko dareere ah iyo isku xirnaan, waxaan hadda ku qaadannaa daqiiqado badan oo aamusnaan ah war xun iyo war xun bad
Waxaan leenahay madax ka sareeysa waqtigooda qaaliga ah oo raba inay ka baxaan xafiiskooda muraayadaha iyagoo wata aragtiyo cajiiba oo waxa kaliya ee ay naga codsadaan taa badalkeeda ay tahay inaan si deg deg ah u siino macluumaadka ay u baahan yihiin ... Marka ku qaado daqiiqad ama daqiiqad iyo badh, ama laba, ama seddex… oo neefta madaxaagu qoorta qoortiisa, waa wax aan fiicnayn.
Oo ha la ogaado in aanan taabanayn mawduuca dib-u-barashada, in haddii tababaruhu yiraahdo "qof walba oo hadda la jira OpenOffice" markaa waan kala baxnay waana intaas, waxaan ka hadlayaa waqtiga jawaabta, wax aan la xallin doonin ...
Ku jawaab Gab
Khibradeyda, dib-u-dhiggan markii la furayo oo la xirayo faylasha LibreOffice waxaa si gaar ah loogu ogaan karaa faylalka qaabka MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, iwm). Taas bedelkeeda, markii la furayo faylasha LibreOffice ee u dhashay, si dhakhso leh ayey u socdaan.
Marka taladaydu waa in la isticmaalo faylalka 'LibreOffice', haddii ay suurogal tahay.
Waad ku mahadsantahay wadaagista, runta waxaan u maleynayaa inay tahay mowduuc wanaagsan in la ballaariyo aqoonta qof aniga oo kale ah, oo gurigeyga isticmaala, waxaan isticmaalaa GNU / Linux waana ku faraxsanahay fursado badan, qalab iyo codsiyo ay leedahay iyo xafiiskaan Libre-ka ah ee aniga ii ah waa wax cajiib ah maadaama aanan wax kale u baahnayn waa dhameystiran tahay!. Tusaale ahaan, uma baahnid inaan rakibo waxyaabo kale oo fiilooyin ah si aan u daabaco faylasha pdf, taas oo aniga muhiim ii ah.
Waxaan ku dhiiri galinayaa qof kasta oo raba inuu la kulmo xafiiskan, waxba laguma lumiyo isku day, taa lidkeedna, wax badan ayaa laga helay.
Ku jawaab Chos
Hal dhibic oo ay illaaween inay xusaan ayaa ah muuqaalka o MSoffice waxay leedahay kaliya 3 midab (madow, buluug iyo qalin). Intii lagu jiray LibreOffice waxaa jira fursado aan la koobi karayn oo lagu doorto midabbo iyo taariikhdoodii ... Tanina waa mid aad ugu faraxsan indhaha ...
Qalabka - Ikhtiyaarrada - Shakhsiyeynta - Xulo dulucda ...
Mid ka mid ah dhinacyada ugu quruxda badan ee Source Furan ayaa ah inuu adeegsan karo wax soo saar tayo sare leh oo ah xafiis bilaash ah oo XOR AH
Kala-jajabinta ama tiro badan oo beddel ah - oo qaarkoodna ay tahay faa'iido - waxay ku dhammaataa jahwareerka la bilaabay barnaamijka bilaashka ah, kala duwanaanshaha muuqaalka, maaraynta, kontaroolada, badhamada, toobiyeyaasha iyo kuwa kale laakiin taas asal ahaan way u adeegaan oo waxay u qabtaan isla wax isku mid ah.
Boqollaal Linux ah ayaa qaybinta qayb kasta, halkii laga abuuri lahaa nidaam weyn, iyadoo la iska indhatirayo oraahda ah "midnimadu waa xoog".
Hadday kaliya mideyn lahaayeen fikradaha iyo dadaalka, ugu yaraan iswaafajinta, horumarka ayaa noqon lahaa mid aad u ballaaran. LibreOffice, OpenOffice, KOffice, GnomeOffice, iyo kuwa kale, mid waliba wuxuu u tartamayaa inuu "si isku mid ah u sameeyo" mid walba qaabkiisa gaarka ah, sidoo kale codsiyo aan la tirin karin. Qaarkood oo leh taageero kafiican $ kuwa kale, runti ma caawinayso.
Muuqaal ahaan ka caawinta hijrada, haduu kujiro linux waa inaad rakibtaa xirmada PPTVIEW (waxaad ubaahantahay khamri) si aad awood ugu yeelatid inaad aragto ppt iyo pps si hufan, maxaa yeelay LO iyo OO midkoodna ma soo saarin daawade fudud. Isku dayga inaad aragto wax badan oo pp ah * runti way gaabis tahay markasta oo la rakibayo dhamaan culeyska 'Libre / Open Impress' halkii laga arki lahaa daawade yar iyo mid fudud, taas oo ku jirta MSO isla markaana ka dhaqso badan in la raro. Daaqadaha waxaan isticmaalaa oo kaliya LO, laakiin waxaan ku rakibaa qalabka daawadayaasha korontada ku shaqeeya, sabab la mid ah
Waxaan hayaa khaladaad iyo cilado ay LO soo bandhigto, oo aan sugayo in loo diro horumariyeyaasha
Laga bilaabo LibreOffice 4.4, laba beddel oo ah noocyada 'Calibri iyo Cambria' ee Microsoft ayaa lagu daray. Si loo rakibo kaliya:
apt-get rakibi noocyada-crosextra-carlito fonts-crosextra-caladea
Haddii aad u baahan tahay taageero luqadaha Yurubta Galbeed, Turkiga, calaamadaha xisaabta iyo qayb ahaan taageerada luqadaha Yurubta Bari, waad rakibi kartaa xirmadan:
apt-hel rakib ttf-bitstream-vera
Jawaab Daniel A. Rodriguez
Mawduuca adeegsiga wada shaqeynta waxaa jira qalab la yiraahdo Sironta, oo sidaan aqriyay u yahay il furan, in kasta oo ay ila tahay inay leedahay nooc bilaash ah oo lacag la bixiyo, laakiin waxay siisaa isdhexgal wanaagsan qaybaha 'Open Source', sida OpenOffice iyo LibreOffice. Waxaan ka tagayaa isku xirka haddii qof xiiseynayo, waxaa loogu talagalay madal kasta (Windows, Mac OS X iyo Linux.) Tani waa url:
Shakhsi ahaan, ma aanan isku dayin, laakiin haye, qof waqti haystaa wuu qaban karaa ka dibna ka tagayaa khibradooda oo ka turjumaya oo eegayaa inay natiijooyin wanaagsan keenayso.
Waxaan haystaa codsiyo ku saabsan Access 2003 waxaanan jeclaan lahaa inaan ka furo xafiiska WPS. Sidee loo sameeyaa? Ma garanayo
Ku jawaab Antperlop
Galab wanaagsan, sideen ugu beddelaa feyl calc qoraa linoux ah?
Ku jawaab maryury